Wasiirka Amniga oo dhaliilay Ciidamadda Haramcad | KEYDMEDIA ONLINE
Wasiirka Amniga oo dhaliilay Ciidamadda Haramcad
Shacabaka Muqdisho ayaa dhibanayaan u noqday dowladda Farmaajo.
Xasan Xundubey Jimcaale, Wasiirka wasaaradda amniga DFS ayaa faray ciidamada ammaanka in ay joojiyaan dhibaatada ay u geysanayaan shacabka xilliyada waddooyinka la xiro.
Wasiirka ayaa sheegay in ciidanku waajib ka saaran yahay ilaalinta shacabka, islamarkaana laga doonayo iney ula dhaqmaan si wanaagsan.
Waxa uu sheegay wasiirka in ay soo gaartay cabasho ah in ciidanku aad u dhibaan shacabkooda.
"Ciidanku dhibaatada haka daayaan shacabka, waa iney u dhimriyaan oo ay si wanaagsan ula dhaqmaan marka waddooyinka ay xiran yihiin" ayuu yiri wasiirka.
Shacabka ayaa jirdil iyo dhibaatooyin kale kala kulma ciidamada dowladda federaalka marka ay waddooyinka magaalada xiraan.
Dhibaato badan ayeey maanta ciidanku u geystaan shacabka Muqdisho kadib markii waddoyinka ay xirtaan, sidoo kalena aysan dadka ula dhaqmin si wanaagsan.
Ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa saaka xiray inta badan waddooyinka magaalada Muqdisho, waxaana la joojiyay dhamaad gaadiidkii shaqeyn jiray, taasoo ku qasabtay shacabka inay lugta maalaan.
Askarta Haramcad, oo ka tirsan Ciidanka Booliiska Soomaaliyeed ayaa lagu soo daadiyey Isgoysyada muhiimka ah ee ku yaalla Caasimadda iyo hareeraha goobaha ay degan yihiin musharixiinta mucaaradka, iyagoo ka bilaabay dhaq-dhaqaaqyo cusub.
Sidoo kale, Ciidamada oo wata Gaadiidka dagaalka ayaa baabuurta dadweynaha, kuwa gaarka loo leeyahay iyo mootooyinka ka celinaya jidadka halbowlaha u ah isku socodka magaaladda, waxaana la arkayaa dadweynaha oo maalaya caagahooda, si ay u gaaraan goobaha ay rabaan.
Si kastaba, xaaladda Muqdisho ayaa ah mid kacsan, iyadoo maalin kahor ay ka dhaceen dibad-baxyo rabshada watay oo sababay dhimasho & dhaawaca dad shacabka ah oo ay toogteen Ciidamada DF